पहिलो त्रैमासमा गुडविल फाइनान्सको नाफा २.३९ गुणा वृद्धि
कात्तिक २६, काठमाडौं । चालू आवको पहिलो त्रैमासमा गुडविल फाइनान्स कम्पनीको नाफा २ दशमलव ३९ गुणा वृद्धि भएको छ । कम्पनीले गत आवको पहिलो त्रैमासमा रू. १ करोड २१ लाख नाफा कमाएकोमा चालू आवको सोही अवधिमा वृद्धि भएर रू. २ करोड ९१ लाख पुगेको हो ।
पहिलो त्रैमासमा कम्पनीको सञ्चालन नाफा १४३ प्रतिशत वृद्धि भएकाले नाफा बढेको हो । सो अवधिमा कम्पनीको वितरणयोग्य नाफा रू.४ करोड ५८ लाख रहेको छ। सो अवधिमा कम्पनीको खुद ब्याज आम्दानी भने १६ प्रतिशतले कमि आएको हो ।
गत आवको पहिलो त्रैमासमा कम्पनीले रू. ७ करोड ४५ लाख ३३ हजार खुद ब्याज आम्दानी गरेकोमा चालू आवको सोही अवधिमा रू. ६ करोड २१ लाख ४८हजारमा सीमित भएको हो ।
चुक्तापूँजी रू. ८० करोड रहेको उक्त कम्पनीले जगेडा कोषमा रू. ३८ करोड ५८ लाख, रिटेन्ड अर्निङमा रू. ९ करोड ९९ लाख र शेयर प्रिमियममा रू. २४ लाख ७५ हजार भन्दा बढी सञ्चित गरेको छ ।
चालू आवको पहिलो त्रैमाससम्ममा कम्पनीले रू.८ अर्ब ६१करोड ८१ लाख निक्षेप संकलन गरेर रू. ६ अर्ब ४१ करोड ६४ लाख कर्जा प्रवाह गरेको छ । चालू आवको पहिलो त्रैमासमा कम्पनीको नाफामा वृद्धि भएसँगै प्रतिशेयर आम्दानी पनि वृद्धि भएको छ ।
गत आवको पहिलो त्रैमासमा प्रतिशेयर आम्दानी रू. ६ दशमलव शून्य ९ रहेकोमा चालू आवको सोही अवधिमा वृद्धि भएर रू. १४ दशमलव ५८ पुगेको हो । त्यसैगरी मूल्य आम्दानी अनुपात १३ दशमलव ०३ र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १६१ दशमलव शून्य ३ रहेको छ ।